Al-Shabaab oo weeraray fariisin Ciidanka NISA ku leeyihiin duleedka Beledweyne | Somalia News
Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin Ciidanka Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ku leeyihiin deegaanka Ceeljaale ee duleedka dhinaca bari ee magaalada Beledweyne.
Saraakiisha NISA ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen Al-Shabaab, isla markaana goobta ay soo weerareen ay aheyd bar koontarool oo ciidanka ku hubiyaan dadka iyo gaadiidka soo galaya magaalada Beledweyne.
Lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka, inkastoo ay xilli habeen aheyd, ayna adag tahay in la helo warar ka madax banaan dhinacyada dagaalamay.
Hase ahaatee waxaa la soo sheegayaa inuu jiro khasaare gaaray dhinacyada dagaalamay.
Xaalada goobtii lagu dagaalamay ayaa saaka degan, waxaana socda howlgal ay wadajir u fulinayaan Ciidanka AMISOM iyo kuwa Nabadsugida.
Previous articleKASHIFAAD: Wejiyada walaaca in Al-Shabaab ay “faragelin karto” doorashada soo aadan
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta la hadlaya Baarlamaanka iyo Ra’iisul Wasaaraha cusub oo la horgeynayo